बाम एकताका दुई हस्तीबारे ज्योतिष शास्त्र भन्छ– ओलीलाई राजयोग, प्रचण्डलाई दशा - Dainik Nepal
ओली ‘मकर’, प्रचण्ड ‘मिथुन’ राशीबीचको सम्बन्ध चाहीँ कस्तो ?
दैनिक नेपाल २०७५ वैशाख ६ गते १३:४४
काठमाडौं, ६ वैशाख । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बाम एकताका लागि कस्सिए पनि यसको निचोडका सम्बन्धमा अल्झिएका छन् । विहीबार दुवैले अनौपचारिक भेट गरेका छन् तर एकताको हलो जहाँको त्यहि अड्कीएको छ । यो नियमित अनौपचारिक भेट हुँदाहुँदै पनि एकता किन अघि बढिरहेको छैन ? यी दुवैको स्वभावले किन साथ दिइरहेको छैन ?